Ubuchwepheshe Bokumaketha: I-Apple Formula
NgoLwesibili, Januwari 11, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Ukumaketha kwezobuchwepheshe, ngokungafani nobuchwepheshe bokumaketha, kuyindlela imikhiqizo kanye nezinsizakalo kubuchwepheshe ezibekwa ngayo kumakhasimende angaba khona. Njengoba umhlaba nezimpilo zethu zihamba online… indlela ubuchwepheshe obumnandi ngayo, okuyizibonelo eziholayo zendlela yokwenza uphawu futhi uthengise konke.
Kunzima ukungacabangi ngokukhangisa ngobuchwepheshe ngaphandle kokukhuluma ne-Apple. Bangabakhangisi abahle futhi benza umsebenzi ongcono kakhulu wokuzibeka ezimakethe ezinabantu abaningi ngamncintiswano… futhi bayaqhubeka nokuthola isabelo semakethe nenzuzo. Okumqoka ekukhangiseni kwe-Apple akukhulumi ngezindleko nezici… kepha kunalokho kugxile kuzithameli.
Lapho ngibona umkhankaso wokumaketha we-Apple, ngikholwa ukuthi ngamunye wehliselwe emiqondweni embalwa:
Ukuhlanzeka - imvamisa, umkhankaso ngamunye unomyalezo owodwa oqondiwe nezethameli… angaphinde. Izithombe zilula, njengomyalezo. Kuyinto evamile kakhulu ukuthi i-Apple ibe nezizinda ezimhlophe noma ezimnyama kuphela… ukuze ukwazi ukugxilisa ukunaka kwakho lapho ingathanda ukuthi ibe khona.
Ilungelo - I-Apple ingumkhiqizo we-premium oletha imikhiqizo emihle nenhle. Bayakwenza ufuna ukuba yingxenye yehlelo. Khuluma nanoma imuphi umsebenzisi we-Apple futhi bazokwabelana ngosuku abathutha ngalo futhi abasoze babheka emuva.
Kungenzeka - I-Apple nayo yenza umsebenzi omuhle wokuthinta izingqondo zababhekiswe kuzo. Lapho ubona umkhankaso we-Apple, uqala ukucabanga ukuthi ungadala ini ngomkhiqizo wabo.
Nasi isikhangiso sakamuva se- Mina impilo (engikuthengile muva nje):
Lokhu kungukukhangisa okunamandla… esikhundleni sokugxila enkingeni, ukubeka (okwenziwe yi-Apple ngezikhangiso ze-Mac uma kuqhathaniswa ne-PC), noma izici, i-Apple igxila kuzethameli. Ubani ongafuni ukudala amavidiyo amanye ama-movie asekhaya awenze iziqeshana zesitayela saseHollywood?
Kwesinye isikhathi izinkampani zingena kulokhu ngokusebenzisa ubufakazi bamakhasimende… kepha i-Apple ibonakala ikugwema lokho. Bavele batshale imbewu… bese bevumela imicabango yezethameli yenze okunye. Yimuphi umuzwa inkampani yakho, umkhiqizo noma isevisi engangena kuwo? Ungakubeka kanjani kangcono ukumaketha kwakho ukuze ungene kuleyo mizwa?
Tags: ukumaketha kwe-apulaifomula lokumaketha le-apulaifomula lokumakethaokungenzekailungeloUkuhlanzeka
I-imeyili Automation ngeWordPress neMy Campaign Pro
Jan 12, 2011 ku-12: 46 AM
Le nkinga angiyitholi kubuchwepheshe kuphela kepha emabhizinisini amaningi. Ukuthengisa okuningi namuhla okwenziwa ngabaninimabhizinisi kusacatshangwa njengenetha lokudoba lapho amabhizinisi ethumela umyalezo obanzi ethemba ukuthi uzofinyelela emakethe efanelekile. Isibonelo, njengamanje ngisebenza nefulethi labafundi elisetshenziselwa ukumaketha nje kubo bonke abafundi basekolishi kepha lapho senza ucwaningo oluthile lwemakethe sathola ukuthi ngaphezulu kwezingu-80% zabahlali kwakungabancane ababesanda kuphuma kwezinye izakhiwo ngenxa yokusizakala kwamakhasimende futhi izindleko zokushisa eziphezulu. Sikwazile ukuthuthukisa kabusha umyalezo wokumaketha kanye nemedian ukukhomba kulowo makethe kuphela. Lokhu ngikubonile kakhulu nakwezinye izimboni. Ibhulogi enhle.
Jan 13, 2011 ku-5: 13 AM
UDoug - kungenzeka ukuthi ekugcineni ungikhahlele ukuthi ngibhale iposi lebhulogi ebengiqonde ukulibhala.